aajavoli- एउटा मुसाको आत्मकथा - एउटा मुसाको आत्मकथा
एउटा मुसाको आत्मकथा
नयाँ कसमको सिर्जना
साढुभाइजीले हाकिम नम्बर दुईतिर हेर्दै अघि भनेकै कुरा दोहोर्याए “दाइ, आज हामी तपाईंका लागि भनेर मात्र आएको हो । तपाईंको लागि म जे पनि गर्न सक्छु । भन्नूस् न मात्र ।
इतिहासको सहप्राध्यापक भए पनि मुसा विशेषज्ञको रूपमा उपस्थित हुँदा उसले कुनै अपठ्यारो अनुभूत गरेजस्तो देखिएन । मैले पत्रिकामा प्रकाशित केही समाचार सम्झिएँ । ओली सरकारले बामदेव गौतमलाई राष्टियसभा सदस्यमा विज्ञका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । उनी कुन विषयका विज्ञ थिए, निर्णय गर्ने बैंठकमा कसैले सोधपुछ गरेन । नियुक्त गर्नेलाई पनि मतलब भएन – उनी कस्ता विज्ञ हुन् ? सञ्चार माध्यमहरूले नियुक्तिको समाचार प्रसारण गरे , तर उनको विज्ञता कुन विषयको हो , कसैले प्रश्न उठाएन । यो पनि हुन सक्छ , सबलाई थाहा भएको होस् कि यिनी विज्ञ–सिज्ञ केही होइनन् । कसैका मतलब साध्य गर्न विज्ञ बनाइएका हुन् । संविधानमा ‘विज्ञ’ शब्दको प्रयोगले गर्दा उनलाई ‘विज्ञ’ शब्दको प्रयोग गर्नु सरकारको बाध्यता थियो । विधिको सरकार न हो ।सरकारले विज्ञ भन्यो, सबले मानिदिए । सरकार शक्तिशाली हुन्छ , उसले विज्ञ भनिदिएपछि पुगिहाल्यो । विधिको त सम्मान गर्नै प¥यो । विज्ञहरू मुलुकमा भरमार छन् । हरेक गल्ली ,हरेक सडक र हरेक मोडमा एक से एक विज्ञहरू भेटिन्छन् , जसले वातावरणको समस्यादेखि अन्तराष्ट्रिय मुद्दाहरूको समेत एक मिनेटमा समाधान निकालिदिन्छन् ।केवल सरकारी मान्यताको खाँचो मात्र छ । कसको कतिखेर भाग्य फिर्ने हो, त्यसको के ठेगान ।
मलाई नरायण ढकालको एउटा संस्मरणको पनि सम्झना भयो । पञ्चायतकालको कुरा । दलहरू भूमिगत तवरले आफ्ना काम गरिरहेका थिए । पार्टीको सहयोगका लागि लेखक–पत्रकारले पत्रिका सञ्चालन गर्दै आएका थिए । अचानक पार्टीको निर्देशानुसार देवी ओझा पत्रिकाको नेतूत्वकर्ता बनाइए, झलनाथ खनालको आदेशमा । सम्पादकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका ढकालले ओझासँग उनको पत्रकारिताको अनुभव बारे सोधपुछ गरेछन् ।
अनुभव नभए तापनि पार्टीको आदेशबमोजिम आफू जेपनि गर्न तयार रेहेको कुरा ओझाले व्यक्त गरेपछि ‘पार्टीले भन्यो भने हवाइजहाज पनि चलाउन जानुहुन्छ’ भनेर ढकालले प्रतिप्रश्न गरेछन् । केही वर्षपछि पछि ओझा शिक्षा मन्त्री भए भने खनाल प्रधानमन्त्री । त्यही मुलुकको विश्वविद्यालयका इतिहासका सहप्राध्यापक मुसा नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि मेरा सामुन्ने उपस्थित थिए । मानिसको योग्यता उसलाई कुन र कस्तो शक्तिको समर्थन प्राप्त छ, त्यसले निर्धारण गर्दो रहेछ । शक्ति छ वा शक्तिशालीको समर्थन छ भने जस्तोसुकै मूर्ख पनि विद्ववानमा दरिन सक्छ । हाकिम नम्बर दुईको साढुभाइ हुनु नै यिनको सबैभन्दा ठूलो योग्यता थियो । त्यही योग्यताको बलमा उनी मुसा विशेषज्ञका रूपमा उपस्थित थिए । मानिसहरूको मुख्य विशेषता नै यही रहेछ ।
मैले कुरा गर्ने मानवशैली ( मानवशैली अलि भन्न नमिल्ला , नेपाली मानवशैली ) बुझिसकेको थिएँ । कुन प्रयोजनले भेट्न आएको हो, त्यो विषयको प्रवेश सरल र सहज तवरले हुनै सक्दैन । त्यस्तै यहाँ पनि भयो । हाकिम नम्बर दुईले साढुभाइतिर हेरेर सोधे “अरु के छ त खबर ?”
साढुभाइजीले आफ्नो साथीको अनुहारतिर हेर्दै निराश स्वरमा उत्तर दिए “के हुनु नि दाइ, हामीजस्ताको यो मुलुकमा । बल्ल बल्ल स्थायी भइयो । त्यसका लागि पनि कत्रा कत्रा आन्दोलन र सङ्घर्ष गनुपर्र्यो ।अब हेर्नूस् न, यत्रो अनुभव भइसक्यो बढुवा हुन नानाभाँतिका नौटंकी छन् । किताब लेखेको हुनुपर्ने, पिएचडी गरेको, अन्तवार्ता आदि–इत्यादि दुनियाँभरका झमेला । यति वर्ष काम गरेपछि सहप्राध्यापक बनाएजस्तै सोझै प्राध्यापक बनाए त भइगयो । कसको बाउको के जान्थ्यो ? माथि आफ्नो मानिस नभएपछि राम्रो ठाउँ कहिल्यै नपाइने । विद्यार्थी छैनन् , तैपनि दैनिक हाजिरी गर्न जानै पर्ने । दशौँ वर्ष भइसक्यो यही लिला छ । आफन्तका कृपाले केही वर्ष प्रशासनिक काम पाइएको थियो , त्यही बेला घरघडेरीको व्यवस्था भयो, नत्र चिल्लै हुने नि दाइ । राजनीतिले खत्तम पारिसक्यो नि सब कुरा ।सबतिर चौपट छ ।राजनीतिमुक्त विश्वविद्यालय नभइन्जेल यस्तै हो ।”
केही नबोलेर चुपचाप बसिरहेको विश्वविद्यालयका अर्का सहप्राध्यापकले मुख खोले “अब हाम्रो पार्टीको एकल सरकार बन्यो भने हामीले पनि जानेका छौँ ।त्यतिबेला सबको एकएक हिसाब हुन्छ । हाम्रै कारणले सबले बिना परीक्षा एक झमोटमा स्थायी हुन पाएका थिए । आज हाम्रो योगदानको कुनै कदर नै छैन । अत्याचारको हद भइसक्यो ।अब भने सहने स्थिति रहेन । सहिन्न पनि ।” उनको अनुहार रातो भयो ।
सही हो । विचराहरूले सङ्घर्ष त उत्पातै गरेका हुन् । तालाबन्दी, घेराबन्दी,नारा जुलुस र यदाकदा तोडफोड । धन्य हुन् ती विद्यार्थी जसले किताबी जानकारीमात्र होइन, यस्ता जीवन उपयोगी ज्ञान पनि एउटै थलोमा पाउने अवसर पाइरहेका छन् । मैले समाचारमा पढेको थिएँ –कम अङ्क दिए भनेर विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा आन्दोलन गरेका थिए । गुरुले दिएको ज्ञानको यस्तो अनुपम प्रयोग शायदै अन्यत्र कतै भएको होला । यी भन्दा धन्य त ती हुन् , जसले यस्तो अवस्थाको सिर्जना गरिरहन्छन् र स्थायी समस्या बनाइराख्छन् । आवश्यकता अनुसार दरबन्दी कायम नगर्दा शक्तिको चलखेल, राजनीतिक तलबितल गर्ने अवसर प्राप्त भइरहन्छ । आफ्ना नातेदार , कार्यकर्ता आदिलाई मनालागी रोजगार दिन पाइयो ।चाकडी त स्वतः पाइने नै भयो, यसबाहेक द्रव्यलाभको बन्दोवस्त पनि हुने संभावना । मेरो पुरानो आवासका मालिक कबाडी साहुकै शैलीमा भन्ने हो भने ‘जो मजा इसमे है , वह और कहाँ ?” सब मजासँग मजा मारिरहेका थिए ।
हाकिम नम्बर दुई चुपचाप आफ्नो साढुभाइको कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनिरहेको थियो । उसका सहकर्मीहरू त झन् बढी गम्भीर देखिन्थे । उसले लामो सास फेरेर म्याडमतिर हेर्दै भन्यो “अब हेर्नूस् । यो देशका माथिल्लो ‘लेवल’का ‘इन्टेलेक्चुअल’हरूमा यत्रो ‘फ्रस्टेसन’ छ । चारैतिर भ्रष्टाचार , नातावाद, कृपावाद, मनपरितन्त्र चलिरहेको छ । अनि यस्तो अवस्थामा यो देश कसरी अघि बढ्छ ? हँ , यो देशको ‘फ्यूचर’ नै छैन । उसले साढुभाइ र उसको साथीतिर हेरेर भन्यो “धन्य, तपाईँहरू कसरी यो मुलुकमा बसिरहनुभएको छ । ‘आइ साल्यूट योर फिलिंग’ यार । ‘रियल्ली, यु पिपुल आर ग्रेट’ । म त सक्दिन यार । मैले त मेरो छोरालाई ‘युएस’ तिर पठाउने विचार गरिसकेँ । यस्तो देशमा बसेर के गर्ने ? काम गर्ने ‘इन्वायरमेन्ट’ नै छैन यहाँ । अनि यो देश कहिले उँभो लाग्छ ?”
उसको कुरा सुनेर मेरो हाँस्यो फुट्यो । टाउको मास्तिर फर्काएरु खित्काएको के थिएँ , साढुभाइजी मलाई देखेर चिच्याए “ ऊ, मुसा ।”
मुसा भनेको सुन्नासाथ हाकिम नम्बर तीन स्टिक समातेर जुरुक्क उठ्यो “खोइ, कहाँ छ मुसा ? ” मानो ऊ सेनापतिको आदेशमा शत्रुको शीरछेदन गर्न तत्पर सिपाही हो ।
हाकिम नम्बर दुई भाइतिर हेरेर हाँसे “भाइले आज दिउँसै हल्का फुल्का दियो जस्तो छ नि , क्या हो ?
साढुभाइले हाँस्दै उत्तर दियो “दाइ पनि । खोइ, कहिलेको के हो । ब्यागमा आधा क्वार्टर भेटियो ।कहाँ सिसी बोकेर हिँड्ने भनेर दुइभाइ मिलेर निट हानिदिएको ।एक छिन त भाउन्न भयो । के गर्नु ? दिग्दारी छ । त्यसमाथि हेर्नु न दाइ, दुइ हप्ता भइसक्यो कहिले हारेको छ , कहिले साउँ मात्र उठेको छ । पत्तिले पनि साथ दिँदैन दाइ । के भएको हो यस्तो ? त्यही झोकमा लगाइदिएको हो । मैले मुसा त देखेकै हो । त्यही मुसाको कसम दाइ ।”
कसम नै खानु थियो भने अरु कसैको खाए भइहाल्थ्यो नि । मेरै कसम किन खानुपर्ने नि । उसलाई आफैले खाएको कसम खुब मन परेछ । हाँस्दै फरक फरक लयमा दोहर्याउँदै गयो– मुसा कसम , मुसा कसम मुसा कसम ।
सबै जना गलल्ल हाँसे । हाकिम नम्बर दुईले दङ्ग पर्दै भने “ ‘इन्टेलेक्चुअल’हरूले मजाक–मजाकमा पनि सिर्जना नै गर्छन् । ल हेर्नूस्, नयाँ कसम को सिर्जना भयो, मुसा कसम । सुन्दा नै कस्तो ‘चार्मिङ।’ लाग्छ मुसा कसम । मुसा कसम ।”
उनका सहकर्मीहरू सबैले सा–सानो स्वरमा दोहोर्याए “मुसा कसम , मुसा कसम ।” एकछिन कोठामा ‘मुसा कसम’ कोरस झैँ गुञ्जियो । सबै जना चुप लागिसकेपछि पनि म्याडम भने चोपारे स्वरमा भन्दै गई “मुसा कसम, मुसा कसम ।” उसले हिन्दी सिनेमाको गीत ‘सनम तेरी कसम”को धुनमा ‘मुसा मुसा कसम गुनगुनाउन थाली ।’
हाकिम नम्बर दुईले भन्यो ‘वाउ , कस्तो ‘स्वीट┌ कसम । यार यो कसम त ‘म्यूजिकल’ टाइपको पनि रहेछ । हंहंहं मुसाााा कस्सअअम । मुस्साा कसम । मजा आयो । आज कस्तो ‘फ्रुटफुल मिटिंङ ’ भयो । आइ एम रिएल्ली प्लिज्ड । थ्यान्कयू गाइज ।”
यिनीहरू गफ्फिन थालेको एक घण्टा जति भइसकेको थियो । त्यो बैंठक के का लागि बोलाइएको थियो, त्यस विषयमा चर्चा नै सुरु भएको थिएन । एउटा ‘स्वीट’ कसमको सिर्जना भएकामा सबै जना प्रसन्न देखिन्थे ।
(धारावाहिक लघु उपन्यास ‘ एउटा मुसाको आत्मकथा’ पाक्षिक रूपमा प्रकाशन गरिने छ । लेखक सम्पर्क [email protected] )
एउटा मुसाको आत्मकथा भाग ४
एउटा मुसाको आत्मकथा भाग ५
एउटा मुसाको आत्मकथा भाग ६
२८ माघ २०७८, शुक्रबार प्रकाशित